Manakara : Neken’ny vahoaka ny “Fisandratana 2030” -
AccueilRaharaham-pirenenaManakara : Neken’ny vahoaka ny “Fisandratana 2030”
02/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Noporofoin’ny vahoakan’i Manakara omaly fa tetikasa mahomby azo hampiharina amin’ny fampandrosoana ny “vinan’ny Fisandratana”, ka tonga nanohana izany ireo ny vahoaka an-tapitrisany tany an-toerana. Tsy nisy mpanakanto, tsy nisy notokanana fa dia faharesen-dahatra tsotr’izao, hihaino ny fanazavana ny filoham-pirenena ny “vinan’ny Fisandratana”.
Feno hipoaka vahoaka ny tanan’i Manakara, renivohitry ny faritra Vatovavy Fitovinany, omaly hariva, nandritra ny fanazavana sy ny fitondran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny vinan’ny Fisandratana 2030 tany an-toerana. Teny ampahatongavana dia efa tazana ny fahavonan’ny tanàna sy ny vahoaka handray ny Filoham-pirenena, ary tsy nisalasala ihany koa ny Filoha Malagasy nandeha an-tongotra nanavatsava sy nifampikasoka tamin’ny vahoaka tany an-toerana. Vokany, tazana ny fiampitan’ny fifampitokisana teo amin’ny vahoaka sy ny filoha amperin’asa. Midika izany fa diso hevitra ny filazana fa maro amin’ireo vahoaka no mitsipaka ny vinan’ny fisandratana, izay paika napetraky ny Filoha hitondrana an’i Madagasikara any amin’ ny fandrosoana. Miteny ho azy tokoa mantsy ny sary fa resy lahatra amin’ny tetikasa fampandrosoana ny vahoaka malagasy.
Tsara ny manamarika fa tsy nisy velively fanokanana asa vita, na ihany koa fametrahana vato fototra nandritra ity dian’ny Filoham-pirenena tany Manakara ity, fa dia fampahafantarana sy fanazavana rano fotsiny ny “vinan’ny Fisandratana”. Izany hoe matetika ireo mpanao politika dia mitondra mpanakanto sy mpanafana fotoana, saingy teto dia dia tena fandresen-dahatra ny fahatongavan’ireo vahoaka maro. Manakara ihany koa izay diso fantatra loatra amin’ny famohan’ny tanana manam-pahaizana maro, dia azo inoana eto fa matoa maro ireo mpanohana dia azo atokisana sy azo ampiharina tsara ny tetikasa fampandrosoana izay novolavolain’ny Filoham-pirenena. Tazana teny amin’ny endrik’ireo vahoaka tonga nanatrika sy nanaradia ny Filoham-pirenena nandritra ny diany tany Manakara ity ihany koa fa mifanohana ny roa tonta.
Tsara ny manamarika fa efa niatomboka ny asa atao amin’ny ‘’Fisandratana ‘’, satria dia efa maro tokoa ny asa sy fotodrafitrasa fototra natsangana ho amin’ny fampandrosoana no efa vita, nandritra izay dimy taona niasan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina izay. Midika izany fa noho ny “vinan’ny Fisandratana” dia tsy ho ela intsony ny Malagasy dia higoka ny vokatry ny asa notanterahina ho an‘ny fampandrosoana. Nandritra ity dian’ny Filoham-pirenena tany Manakara ity moa dia nilaza ny depioten’i Manakara, Andriantsizehena Benja Urbain fa “mino ny vahoaka an’i Manakara fa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina no olona mahavita hanondrotra ny firenena ho amin’ny fampandrosoana. Mino ihany koa ity solombavambahoaka lany tao Manakara ity fa Atoa Hery Rajaonarimampianina dia mbola hanohy ny fotoam-piasany amin’ny dimy taona manaraka’’.